Fandriana mavokely geometrika maloto mavo-HF29026, Sina Fotsy mavomavo geometrika fandriana-HF29026 Mpanamboatra, mpamatsy, orinasa - Zhejiang Rancho Santa Fe trano lamba Co., Ltd
STYLE LUXURIOUS & QUALITY TSARA - Ny Beds nyebar dia fomba kanto amboradara tsara tarehy sy mpampionona ny famolavolana sisin-tany. Ataovy tsara ny efitrano ary manintona ny masonao. Ny farafara fandriana dia azo ampiasaina amin'ny fampiasana isan'andro na fotoana manokana. Ny stitching embossed haingon-trano dia manome endrika mahazatra tsy misy ezaka, avy hatrany. Ity farafara farafara faran'izay lafo vidy ity dia ny accent tonga lafatra amin'ny efitrano fandriana na any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny.